Faysa Cali Waraabe oo kahadlayay wararka sheegaya imaatinka madaxweynaha Somaliya ee Hargeisa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Faysa Cali Waraabe oo kahadlayay wararka sheegaya imaatinka madaxweynaha Somaliya ee Hargeisa
Faysa Cali Waraabe oo kahadlayay wararka sheegaya imaatinka madaxweynaha Somaliya ee Hargeisa
Hogaamiyaha Xisbiga Ucid Eng Faysa Cali Waraabe oo kahadlayay wararka sheegaya imaatinka madaxweynaha Somaliya Farmaajo ayaa yidhi sidan .
“Farmaajo Imaatinkiisa in lana la hor yimaadaaba nama qabato , Farmaajo wuxuu Somaliland kasooo doonikaraana majirto , madaxweynuhuna inuu nadhex keeno raygaa may ahayne waxay ahayd inuu markaba daafaco ayay ahayd “.
” Nin aan Galmudug tagi kareyn oo yidhaa Hargeysaan tagaya adeer taa ogolaan meyno “
Gudoomiye Faysal Cali waraabe oo sii watey waraysigan uu siiyay Odaacada Voa ayaa sidoo kale kahadlay mawqifka ka xisbi ahaan uga meel yaala waxaanu yidhi .
” Arintana mid Muuse lala xisaabtamo ayay noqonaysaa oo shacabka Somaliland la xisaab tamaan hadii uu dalkii halkaa marinayo , oo layidbaa farmaajaa imanaya , khamiistaan imanayaa dalkii shir qaran oo deg degaan ka galeynaa arintaasi .”
” Farmaajiyo kooxdiisa dhalinyartaa ee uu meesha kusoo ururiyay ee Muqdisho qariibka ku ah la furi mayno wada hadal , doorashada danbe ayaanu sugaynaa in dad wanaagsan oo caqli leh imaadaan ”
Qaramada Midoobay oo kaalmo lacag ah u qorsheysay fatahaadaha Soomaaliya
Madaxda Al Shabaab oo ka qayb gashay xaflad qalin jabin arday...